Afaka Mijery Fahitalavitra Amin’ny Youtube Ny Rehetra Afa-tsy Ny Koreana Tatsimo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Desambra 2014 2:27 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, македонски, Español, 日本語, English
Filazàn'ny MBC ho an'ireo Koreana mpampiasa azy mikasika ireo votoatin-dahatsarin-dry zareo ao amin'ny YouTube. Mivaky hoe: ” Manomboka ny 1 Desambra 2014, tsy ho hita intsony ao amin'ny fantsona Youtbe-‘ny MBC ny votoatin'ireo fandaharan'ny fahitalavitra MBC. Misaotra anareo tamin'ny fitiavana sy fanohanana ny fantsona Youtube MBC”
Nanapa-kevitra ny hibahana ireo mpampiasa aterineto ao amin'ny firenena tsy ho afaka hijery ny votoatim-pandaharany ao amin'ny Youtube ireo tambajotranà fahitalavitra goavana ao Korea Atsimo, ary mikisaka mankany aminà sehatra hafa fametrahana votoatin-dahatsary lazaina fa mampiakatra ny tombontsoan-dry zareo amin'ny resaka dokambarotra.
Nampikatro-nify Koreana maro ilay fanapahan-kevitra, indrindra fa hoe hanohy hamoaka ny votoatiny ao amin'ny Youtube ihany ireo tambajotra ireo saingy ho an'ireo mpampiasa iraisam-pirenena (tsy Koreana Tatsimo).
Nanomboka tamin'ny herinandro voalohan'ny Desambra, marobe ireo fantsompahitalavitra sy “cable”, ka isan'ireny ny MBC, SBS, tvN sy JTBC, no nanomboka nisakana ireo IP Koreana tsy hahita ny lahatsarin-dry zareo ao amin'ny Youtube. Nolazain'ireo famoaham-baovao marobe fa resaka vola no ao ambadik'ilay hetsika : kely ny vola omen'ny Youtube ho an'ireo tambajotra avy amin'ny dokambarotra (manodidina ny 55 isanjato, raha ny sasany indray milaza 40 isanjato), nefa ireo vavahadin-tserasera Koreana toy ny Naver sy ny Daum Kakao nahavita nifanaraka tamin'ireo tambajotra fa hamerina amin-dry zareo ny 90 isanjato eo ho eo. Tany amin'ny Jona tany ho any, fantsom-pahitalavitra Koreana niisa fito, taorian'ny nivondronany, no nifampiraharaha tamin'ny Youtube mba niezaka ny hampitombo ny anjara volan-dry zareo, saingy tsy nahavita nahita marimaritra iray akory.
Tondraky ny fanakianana avy amin'ny Koreana mikasika ilay fanapahankevitr'ireo tambajotra ny media sosialy isan-karazany, tamin'ny filazany azy io ho tsy mahay mandinika, tsy mijery lavitra ary manavakavaka ireo mpanaraka azy ihany. Marobe ireo nitaraina fa tsy misosa tsara toy ny Youtube ireo sehatra fizaràna votoatin-dahatsary ao an-toerana ka manery ireo mpampiasa mba hametraka rindrambaiko hafa izay afaka manova ny solosainy ho marefo mety hiharan'ny fanafihan'ny mpijirika amin'ny hoavy (Vakio ny tatitry ny Global Voices tany aloha, “Fifanenjanan'ireo Koreana amin'ny Active X” [Anglisy]).
Amin'ny maha [Koreana] mpampiasa izay mankafy ny mijery lahatsary ao amin'ny YouTube, tena zavatra manahiran-tsaina ilay fanapahankevitr'ireo tambajotram-pahitalavitra Koreana hampiato ny tolotry ny YouTube ao Korea fotsiny, raha toa ka mamela kosa ireo vahiny mpampiasa azy hijery ny votoaty avy amin-dry zareo ao ihany. Endrika iray amin'ny fanavakavahana atao amin'ireo Koreana mpijery izany. Manomboka izao dia hampiasa Naver ry zareo, saingy mihisatra be ny tolotra lahatsary ao amin'ny Naver sady mankarary ny masoko ny kalitaon'ny sary. Ankoatra izany, rakotry ny Active X sy ny dokambarotra ny olona. Io no fanapahankevitra ratsy indrindra noraisin'ireo tambajotra ireo.
Taorian'ny nikarohany valinteny momba izay antony nanajanon'ireo tambajotra ireo ny tolotra Youtube [ho an'ny Koreana], tsikaritro fa zara raha nahazo tombony ambany dia ambany tao amin'ny Youtube ireo tambajotram-pahitalavitra. Ireny olona kaondrana ireny, izay mbola miasa saina hatrany momba ireo mpanjohy azy amin'ny sehatra iraisampirenena no nanapa-kevitra hampitsahatra ny tolotra ao Korea manokana.
Izaho tsy miteny hoe vahaolana ho an'ny olana rehetra ny YouTube na Google, saingy tena fikororosiana kosa ny fanapahankevitr'ireo tambajotra hampiato ny tolotra Youtube. Raha toa ka hoe tonga hametraka ny sehatra fizaràna votoatin-dahatsary izay azy ireo manokana ry zareo, mety mba ho takatro ihany. Fa ankoatra izay, ity fanapahankevitra ity dia tsy mifanindran-dàlana tanteraka amin'ny zavatra nataon-dry zareo tany ampiandohana; indraindray ry zareo dia nampakatra an-tsitrapo ireo lahatsary rakitry ny elany ary navitrika tokoa nampiasa ny Youtube. [fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: matetika ireo fahitalavitra no mampakatra feno an'ireo andian-tantara malaza fandefany amin'ny fahitalavitra ho ao]
Nampiasa “proxy” aho ary dia nitady làla-miholika [mba hijerena ireo votoaty ao amin'ny Youtube aty Korea], saingy tena maharary tsotra izao ilay fihisàrany. Fahiny, nampiasa “proxy” aho, saingy tamin'izany fotoana izany dia mba hijerena ireo votoaty avy any ivelany, fa tsy ny votoaty Koreana. Tena faran'izay kidaladala ity toe-draharaha ity.